रियल मड्रिडले भन्याे : रोनाल्डोको स्थानमा नेइमार चाहन्छ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेकपाभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टि
गरिबी निवारण कोषको बजेटमा भ्रष्टाचार ९ जनालाई जेल र जरिवाना
निर्मलाका हत्यारा छिट्टै पक्राउ पर्ने गृहमन्त्रीको दावी
अध्यक्ष मण्डल र केन्द्रिय पदाधिकारीको बैठक बिहिवार बस्ने
प्रदेश नम्बर ७ को नाम खप्तड, राजधानी कैलाली !
निर्मला बलात्कार र हत्याको छानविन प्रतिवेदन बुझाईयो
रियल मड्रिडले भन्याे : रोनाल्डोको स्थानमा नेइमार चाहन्छ
काठमाडौँ । भविष्यसम्मका लागि राम्रो हुने भन्दै स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोको स्थानमा नेइमार चाहेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
भविष्यमा रोनाल्डोको स्थानमा रहने सक्ने गरी नेइमारका बुवा र रियल मड्रिडका अध्यक्षबीच कुराकानी भएको खबरमा उल्लेख छ । खेलकुदसम्बन्धी स्पेनिस पत्रिका मुन्दो देपोर्टिभोका अनुसार रियल मड्रिडका अध्यक्ष फ्लोरेनटिनो पेरेजले केही दिनअघि स्पेननै फर्किएर खेल्न सक्ने सम्भावनाबारे नेइमारसँग कुरा गरेका थिए । पेरेजले अहिलेकै लागि मात्र नहेरेर भविष्यसम्मका लागि नेइमार ल्याउन सके राम्रो हुने बताएका छन् । रोनाल्डोको रियल मड्रिडमा २०२१ सम्मका लागि मात्र सम्झौता छ । त्यसपछिका दिनमा नेइमार रोनाल्डोको विकल्प हुन सक्ने रियल मड्रिडको योजना छ ।
नेइमार अहिले विश्वकै महंगा खेलाडी हुन् । उनी स्पेनिस क्लब बार्सिलोनबाट अहिलेसम्मकै धेरै रकम २२ करोड २० लाख युरोमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) गएका हुन् । नेइमारले त्यहाँ हप्ताको ८ लाख ६५ हजार युरो पारिश्रमिक पाउँछन् । यसको अर्थ २५ वर्षका नेइमारले पिएसजीबाट करसहित वर्षको चार करोड ५० लाख युरो पारिश्रमिक पाउने छन् । पिएसजीले नेइमारसँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेको छ । नेइमारले पिएसजीमा १२ खेलमा ११ गोल गरिसकेका छन् ।
क्रिष्टियोनो रोनाल्डोले यो सिजन अहिलेसम्म स्पेनिस ला लिगामा एक गोल मात्रै गरेका छन् । लिगका सुरुका चार खेल प्रतिबन्धका कारण गुमाएका रोनाल्डोले लिगमा गोलका हिसाबले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । तर उनले च्याम्पियन्स लिगमा भने राम्रो गरिरहेका छन् ।
भारत ढुक्क, पाकिस्तान र बंगलादेश अनिश्चित
दुवई । एशिया कप २०१८ अन्तरगत सेप्टेम्बर २३ तारिखमा...
एशियाकप २०१८ मा भारत र पाकिस्तान आमने सामने
दुवई । एशिया कप २०१८ अन्तरगत भइरहेको सुपर चार खे...
त्यति बेला सम्म रहयो भने !
पञ्चायती कालमा बेनिघाट गाबिस हालको बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिकाको बेनिघाटमा रहेको ...
जंगली च्याउ र सडक बालक
भनिन्छ कहिले काहिं हामिले सुनेका कुरा र देखेका कुरा समेत सत्य हुन्नन् । तर कतिप...